Dagaallo dhex maray ciidamda dowladda iyo Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamda dowladda ee fadhigoodu yahay deegaanada Galmudug ayaa dagaal kala hor yimid Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallama bartamaha Soomaaliya.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Warka naga soo gaaraya caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in uu saakay dhacay dagaal dhex maray ciidamada milatariga ee qeybta 21-aad ee fadhigoodu uu yahay magaalada Dhuusamareeb iyo Kooxda Al-Shabaab.
Dagaalka oo dhacay saakay aroortii ayaa dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda gaar ahaan qaybta 21-aad iyo Al-Shabaab waxaana ciidaada qeybta 21-aad ay saaka weerar xoog leh ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka labi-dule, waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay uu geystay khasaaro kala duwan.
Saraakiil katirsan guutada uu hoggaamiyo General Mascuud ee 15aad ee Taliska Qaybta 21-aad ayaa sheegay in dagaalka uu si gaara uga dhacay inta u dhexeeysa deegaanada sina-dhaqo iyo labi-dulle oo kawada tirsan Gobolka Galgaduud. wararka ka imaanaya deegaanadaasi waxay sheegayaan in uu jiro qasaare labada dhinac soo gaaray balse ilaa iyo hadda ma jiraan cid ka hadashay dhinacyada uu dagaalku dhex maray.
Wixii wara ee kusoo kordha dagaalkaasina wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu eebbe raalli ka noqdo.
Waxay wararku sheegayaan in labada Mas'uul ay wakiil ka yihiin Farmaajo, oo usoo diray inay ka qaboojiyaan mowjadaha ku kacsan.